အကောင်းဆုံး R8 Tool ကိုရှင်, R8 Collet Mills Chuck, Mills Tool ကို Holder, ရောင်းမည် R8 Mills စက် Tool ကို Holder
Home > ထုတ်ကုန်များ > tool ကိုရှင်R8 Tool ကိုရှင်
R8 Tool ကိုရှင် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, R8 Tool ကိုရှင်, R8 Collet Mills Chuck ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ကြိတ် Tool ကို Holder R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
High Quality R8-B18-M12 လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore
High Quality R8-B22 လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore
High Quality R8 B22 လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore
R8-FMB27-M12 Shell ကစက် Arbore
High Quality R8-FMB27-M12 Shell ကစက် Arbore
High Quality R8-FMB22-M12 Shell ကစက် Arbore
C45 R8-JT6 လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore
High Quality R8-B22 M12 Collets Chuck
CNC ခုံစိတျအပိုငျး R8 collet Chuck
CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများကို R8 collet
High Quality R8 ER25 Collets ရှင်
High Quality R8-B18-M12 လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore specification 1. ပစ္စည်း: 65Mn 2. ခွန်အား: HRC44-48 3. တိုးတက်မှု 1mm သို့မဟုတ် 1/64 "ခြေလှမ်း 4. ရှေ့နှင့်နောက်ကျောမှာ6မြောင်းလမ်း Are 5. ရိုးသားစွာဝန်ဆောင်မှု ကုန်ပစ္စည်းများအားသာချက်များ: 1. R8 ER Collets ရှင်, မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကုသမှုခိုင်မာသောတူညီနေမှု။ 2....
High Quality R8-B22 M12 Collets Chuck လည်းနွေဦး collet အဖြစ်လူသိများ R8 ER Collets ရှင်, တစ်ဦးလေ့ကျင့်ခန်း \_ ကြိတ်စက်, တူးဖော်ခြင်းနှင့်ကြိတ် Chuck ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်ယင်း၏ function ကိုလေ့ကျင့်ခန်းရှုးသို့မဟုတ်ဓားညှပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် collet လက်ရှိလူသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။...
High Quality R8 B22 M12 Collets Chuck လည်းနွေဦး collet အဖြစ်လူသိများ R8 ER Collets ရှင်, တစ်ဦးလေ့ကျင့်ခန်း \_ ကြိတ်စက်, တူးဖော်ခြင်းနှင့်ကြိတ် Chuck ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်ယင်း၏ function ကိုလေ့ကျင့်ခန်းရှုးသို့မဟုတ်ဓားညှပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် collet လက်ရှိလူသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။...
R8-FMB27-M12 Shell ကစက် Arbore specification 1. ပစ္စည်း: 45 # သံမဏိ 2. ခွန်အား: HRC44-483။ ရိုးသားစွာဝန်ဆောင်မှု အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ TeLi ,...
High Quality R8-FMB27-M12 Shell ကစက် Arbore specification 1. ပစ္စည်း: 45 # သံမဏိ 2. ခွန်အား: HRC44-483။ ရိုးသားစွာဝန်ဆောင်မှု အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ TeLi ,...
High Quality R8-FMB22-M12 Shell ကစက် Arbore specification 1. ပစ္စည်း: 45 # သံမဏိ 2. ခွန်အား: HRC44-483။ ရိုးသားစွာဝန်ဆောင်မှု အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ TeLi ,...
C45 R8-JT6 လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore specification 1. ပစ္စည်း: 45C 2. ခွန်အား: HRC44-48 3. ရှေ့နှင့်နောက်ကျောမှာ6မြောင်းလမ်း Are 4. ရိုးသားစွာဝန်ဆောင်မှု အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ TeLi ,...
High Quality R8-OZ25 M12 Collets Holdres လည်းနွေဦး collet အဖြစ်လူသိများ R8 ER Collets ရှင်, တစ်ဦးလေ့ကျင့်ခန်း \_ ကြိတ်စက်, တူးဖော်ခြင်းနှင့်ကြိတ် Chuck ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်ယင်း၏ function ကိုလေ့ကျင့်ခန်းရှုးသို့မဟုတ်ဓားညှပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် collet လက်ရှိလူသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။...
CNC ခုံစိတျအပိုငျး R8 collet Chuck CNC ခုံစိတျအပိုငျး R8 collet Chuck ခေါင်းကို CNC ခုံစိတျအပိုငျး R8 collet Chuck CNC ခုံစိတျအပိုငျး R8 collet Chuck R8 Shanks ER Collet အဆုံးစက် Chuck HRC48-55 ခိုငျမာနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိပစ္စည်းများ၏လုပ်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ R8 ER16 ER32 ER40 စက် Chuck စီးရီးအပါအဝင် R8 စက် Chuck...
CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများကို R8 collet 1. ပစ္စည်း: 65Mn 2. ခွန်အား: clamping တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း HRC55 ~ 66 elastic တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း HRC40 ~ 45 3. Clamp Range: 1-20mm
High Quality R8 ER25 Collets ရှင် လည်းနွေဦး collet အဖြစ်လူသိများ R8 ER Collets ရှင်, တစ်ဦးလေ့ကျင့်ခန်း \_ ကြိတ်စက်, တူးဖော်ခြင်းနှင့်ကြိတ် Chuck ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်ယင်း၏ function ကိုလေ့ကျင့်ခန်းရှုးသို့မဟုတ်ဓားညှပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် collet လက်ရှိလူသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။...
တရုတ်နိုင်ငံ R8 Tool ကိုရှင် ပေးသွင်း
R8 Tool ကိုရှင်; ကောင်းမွန်သော Surface က finish ကို, တိုးမြှင့် feed ကိုမှုနှုန်း
R8 Collet Mills Chuck
ကြိတ် Tool ကို Holder
R8 Mills စက် Tool ကို Holder
ER Tool ကိုရှင်